အဘယ်အရာကိုကောလိပ်ကလေးများဖျားနာ Get ဘယ်အချိန်မှာလုပ်ပါရန်
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ ကျန်းမာရေး & ကျန်းမာရေး
ကောလိပ်ကလေးများဖျားနာ Get လိုက်တဲ့အခါ
တဦးတည်းရဲ့လူနေမှုရပ်ကွက် 10-ပေအခါဝေဟင်ရောဂါလျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်။ နှာချေခြင်း, ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် whoosh, တဦးတည်းရဲ့အခန်းဖော်ကရှိပါတယ်။ နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းလေးတွေအစားအစာ, မျက်မှန်နှင့်ကောင်းစွာ, အနမ်းမျှဝေဘို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်ကြသည်။
သင့်ကလေးကကောလိပ်ကျောင်းမှာကွယ်ပျောက်မယ့်ဖြစ်စေ, လွတ်လပ်သောဘဝအတှကျပွငျဆငျကူညီပေးနေသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာမိမိအပေါ်အသကျရှငျအတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း, မိမိကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့သူ့ကိုပြင်ဆင်နေသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ကလေးကျန်းမာရေးကောင်းသူပင်အိမ်မှာအရွက်မတိုင်မီကောင်းစွာ-ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်သေချာအောင်နှင့်အတူစတင်သည်။ အဆိုပါ "သင်သည်အဘယ်သို့နေမကောင်းရကြဘူးလာသောအခါလုပ်ပေးရန်" ဆွေးနွေးမှုသူတစ်ဦး 103 ဒီဂရီအပူချိန်နှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာ sobbing နှင့်လည်ချောင်းနာဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေသည့်အခါသင့်ကလေးကိုအရွက်မတိုင်မီစတင်လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ဘဲ။
သင့်ကလေးဖျားနာလာခင်မှာလုပ်ပါမှ4မရှိမဖြစ်အရာ
ဂျက်ကီ Burrell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
Docs နှင့် Shots
အဆိုပါကလေးအထူးကုသို့မဟုတ်ဆရာဝန်တဦးတည်းနောက်ဆုံးခရီးစဉ်အတွက် fit ။
သင့်ကလေးပြီးစီးခဲ့နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများဦးနှောက်အမြှေးကာကွယ်ဆေးတစ် Tdap booster ကတော့အမျိုးသမီးငယ်များအတွက် HPV ကာကွယ်ဆေးများနှင့်တုပ်ကွေးရိုက်ချက်များအပါအဝင်တော်တော်များများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကာကွယ်ဆေး, လိုအပ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးပုံစံများကိုရရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်အိပ်ဆောင်ပထမဦးဆုံးအကူအညီ Tylenol သို့မဟုတ် Motrin နှင့်အတူကိရိယာအစုံ, ရိုးရိုးအနာကပ်ပ, Bacitracin သို့မဟုတ်အခြားပဋိဇီဝဆေးနံ့သာဆီမတ်မတ်, သင်၏ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်သို့တိုက်ပွဲများရောဂါအတွက်အခြေခံသန့်ရှင်းရေး၏အရေးပါမှုကိုအထင်ကြီး။
ပိုကောင်းသေး, အကြီးအကြည့်ပေမယ့်လည်း "ရှေးဦးသူနာပြု 101" ပြင်ပအပေါ်ပုံနှိပ်ထားပြီးမသာတဲ့ကိရိယာအစုံပါစေ။
အရည်ဆပ်ပြာနှင့်အတူသင့်ကလေးတပ်ဆင်။ ဒါဟာ Anti-ဘက်တီးရီးယားဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဘားဆပ်ပြာ၏စုဆောင်း scum အမှန်တကယ်ဘက်တီးရီးယားထဲ၌တည်နိုင်သည်, သိနာတောင်ပေါ်ရဲ့ဒေါက်တာယောလ Forman ကပြောပါတယ်။
ကျောင်းသားကနျြးမာရေးအကွံဉာဏျ hotline နှင့်အရေးပေါ်န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာဖွေသင့်ကလေးကိုတိုက်တွန်းကြသည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများသည်သူ၏ orientation ကို packet ကိုအတွက်အဖြစ်ကောလိပ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါအဘယ်အရာ- အကယ်. စကားပြောဖူး
မိမိအအပူချိန်မြင့်တက်သို့မဟုတ်သူ crummy ခံစားခဲ့ရသည့်အခါသင်အမြဲသူ့ကိုဘို့ထိုသို့ပြု၏တူညီသောအရာ - Self-စောင့်ရှောက်မှုကြီးထွားလာ-ups ၏ကြင်နာသူတို့နေမကောင်းရသည့်အခါလုပ်ပေးဘို့သင့်ကလေးကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့သုံး pronged ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ် more ...
တစ်ကောလိပ် Kid နာမကျန်းလာသည့်အခါကိုယူမှ3ခြေလှမ်းများ
ရှင်ပေါလု Bradbury / OJO ပုံများ / Getty Images
သငျသညျဝေးအိမ်မှာနေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းဆိအခါဒါဟာနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောက်စရာပါပဲ။ တစ်ခုတည်းသောအရာ scarier ဝေးအိမ်မှာနေတဲ့နေမကောင်းကောလိပ်ဆိ၏မိဘဖြစ်ခြင်းသည်တကား
သင်ကကျောင်းဝင်းမေးလ်အခန်းထဲမှာမှတစ်ဆင့်ပူကြက်သားဟင်းချိုနှင့် TLC များအတွင်းပို့မပို့နိုင်ပေမယ့်သင်ဤရိုးရှင်းသော 3-ခြေလှမ်းချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမိမိကိုယျကိုဂရုစိုက်ရန်အခြေခံနှင့်အတူသင့်ကလေးကိုပွငျဆငျနိုငျပါ။
အဆင့် # 1 - ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု
သူတို့က Tylenol နှင့်အတူဖျားနာဆကျဆံသငျ့, သိနာတောင်ပေါ်ရဲ့ဒေါက်တာယောလ Forman ကပြောပါတယ်။ အရည်မသောက်ရ, ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောပဒေသာရကနေ့အဘို့သွားပုံကိုကြည့်ပါ။
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်၏လက္ခဏာနှင့်မဆိုဒုက္ခလက္ခဏာတွေများအတွက် Watch ဥပမာ - တစ်ဦးခိုင်မာသောလည်ပင်း, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ကောလိပ်များလိုအပ်စတင်ကတည်းက - သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်း - ကျောင်းသားများဦးနှောက်အမြှေးကာကွယ်ဆေးရဖို့, နှောက်အမြှေးရောင်၏အမှုများကိုကောလိပ်ကျောင်းအပေါ်ရှားပါးပါပြီဒါပေမယ့်ရောဂါအစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားခြင်းနှင့်သေစေလောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ချောင်းဆိုးသလော အဆိုပါ over-the-counter ချောင်းဆိုးရည် Skip ။ "ကျွန်မနေတဲ့ပျားရည်, သံပုရာနှင့်လက်ဖက်ရည်လူတစ်ဦးပေါ့," Forman ပြောပါတယ် - နှင့်သုတေသနပျားရည်နှင့်နွေးထွေးသောအရည်၏ချောင်းဆိုး-နှိပ်ကွပ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအပေါ်သူ့ကိုဖွင့်ထောက်ခံ။
အဆင့် #2- အကြံဉာဏ်များအတွက် Call
အဖျားချလာမပါဘူးဆိုရင်, ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အန်ထက်ပိုမိုခြောက်နာရီများအတွက်ဆက်လက်ရှိသို့မဟုတ်အခြားရှိပါတယ်, ရောဂါလက္ခဏာကိုနှောက်ယှက် Forman သတိပြုဖို့လို၏ဘေးထွက်အပေါ်မှားယွင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ကျောင်းသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအနည်းဆုံးဖုန်းဖြင့် "လို့ပြောပါတယ်။ "
ဒါကလည်းဒဏ်ရာများအတွက်တတ်၏။ ရောင်ရမ်းခြင်းနိမ်ပါဘူးသို့မဟုတ်တစ်ဖြတ်သို့မဟုတ်ပွန်းပဲ့အနီရောင်ပေါ်လာပါ, တင်ဒါခံစားရသို့မဟုတ်ပြည် oozes အကယ်. သင့်ကလေးကျန်းမာရေးစင်တာကိုပဌနာရန်လိုအပ်ပါသည်။
သူနာပြုဆရာများသောအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကိုအလယ်ဗဟို triage လိုင်းများဝန်ထမ်းများကကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကမေးခွန်းတွေမေးအကြံပေးနှင့်သင့်ကလေးအတွက်မြင်စေရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်, ဖြစ်စေကျန်းမာရေးစင်တာသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ခန်းမှာပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် #3- မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဆရာဝန်ကိုသွားပါ
သင့်ကလေးကအရမ်းနေမကောင်းသို့မဟုတ်နာကျင်မှုတွေအများကြီးထဲမှာတည်သည်မှန်လျှင်, သေချာသူကနျြးမာရေးစင်တာသို့မဟုတ်အရေးပေါ်အခန်းရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦး, အခန်းဖော်သို့မဟုတ်အိပ်ဆောင်နေထိုင်သူလက်ထောက်ထံမှအကူအညီကိုရှာတတ်၏ပါစေ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျောင်းပရဝုဏ်လုံခြုံရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ်ရုံကငျြ့ဝတျထောက်ခံမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီမပေးပါဘူး, Forman ကပြောပါတယ်, သူလည်းဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကောလိပ်ကလေးများဖျားနာ Get လိုက်တဲ့အခါ: မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မကြာခဏမိုနို, က်တုပ်ကွေးနဲ့အခြားဘုံကောလိပ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးသော်မှအဖြေကိုရှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးကကောလိပ်ကျောင်းများတွင်မိုနိုရရှိသွားတဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း အဲဒါကိုကဘယ်လိုကုသဘာလဲ? အဖွေ
ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါ "ကိုယ့်စိတ်ဖိစီးမှု" နှင့်အခါပိုပြီးကြောက်စရာတစ်ခုခုဖြစ်သနည်း အဖြေ။
သင်ကနာမကျန်း Get အကယ်. ကောလိပ်မှာဘာလုပ်ပါရန်
အဆိုပါ Sophomore မဇ္ဈိမထဲက Get လုပ်နည်း
ကောလိပ်အတွက်လုံလောက်အိပ်စက်ခြင်းရယူခြင်း7ခြေလှမ်းများ
ကောလိပ်အတွက် Destress ရန်နည်းလမ်းများ
အတိတျ participle: ဒါဟာကတစ်ဦးနာမဝိသေသနတစ်ကြိယာရဲ့ရဲ့
Paintball Play လုပ်နည်း
အဆိုပါ Cooper ကပြည်ထောင်စု GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
နားထောင်ခြင်းနားလညျမှု - တစ်ကချေသည်တွေနဲ့အင်တာဗျူး
Multiregional Hypothesis: လူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီ
လော်ရာ Hillenbrand စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများအားဖြင့် '' အပြတ်အတောက် ''
ကျိုင်းကောင်အကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
မူရင်း Gurmukhi နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အတူ Ardas
တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများကို Kettering
10 နည်းလမ်းများအထောက်အထားသူခိုးသင့်ပြန်ကြားရေး Get
PGA Tour သမိုင်းမှာတော့အကြီးဆုံးရုတ်တရက်-မရဏ PLAYOFF
သင့်ရဲ့ Corvette များအတွက်အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်ရေနံ Get
Blank န်ထမ်းစက္ကူ - Tab ကို, ဝန်ထမ်းနှင့် Chord Sheet များ
Back-to-Back ကိုမာစတာ Winners (နှင့်အဘယ်အရာကိုအမှတ်3အဘို့အ Going ဖြစ်သွား)
အန်ဒီ Borowitz Quotes
Pierce - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိသားစုသမိုင်း
တစ်မြေကြီးဆိုင်ရာတစ်ခုမှာခင်မှာတစ် Premortal ဘဝအသကျရှငျ
"လုပ်ပါ" အကြားခြားနားချက်ကိုလေ့လာပါနှင့် "Make"